Channel-Mandalay| The Crimes That Bind
The crime that binds (2020)
အမြဲတမ်းဇာတ်ကားကောင်းတွေပဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးကတော့ IMbd 6.9အထိရရှိထားပြီး ဒီနှစ်အတွင်းမှာမှ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Crime, Drama, Thrillerတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး ရာဇဝတ်မှုဇာတ်ကားတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားမယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါရှင်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ချမ်းသာတဲ့အာဂျင်တီးနားလူမျိုးလင်မယားနှစ်ဦးဟာ အိမ်ဖော်မလေးနဲ့ သူမရဲ့ အဖေမပေါ် သုံးနှစ်အရွယ်သားလေးတို့နဲ့ တစ်အိမ်တည်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ ထိုလင်မယားဟာ မြေးအချစ်ကို ငတ်မွတ်နေတဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်သူ ဒန်နီရယ်ဟာ အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း အဆင်မပြေသောကြောင့် မိန်းမနဲ့ကွဲကွာခါ သားလေးမာတင်နဲ့လည်းမတွေ့ရပါဘူး။ တနေ့မှာ ဒန်နီရယ်တစ်ယောက် သားလေးမာတင်ကိုတွေ့ချင်ဇောနဲ့ သူ့အရင်မိန်းမကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားမှုတွေ ကျူးလွန်မိသွားတဲ့အခါ ထောင်ထဲရောက်သွားပါတော့တယ်။ ထိုထောင်ထဲမှ သူ့သားဒန်နီရယ်ကို ပြန်ထုတ်ဖို့အတွက် မိခင်ဖြစ်သူ အယ်လီစီရာမှာ များစွာကြိုးပမ်းရပါတော့မယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သူ့အိမ်ဖော်မလေးကပါ ကိုယ့်သွေးသားတော်စပ်သူကိုသတ်ဖို့ ကျူးလွန်တဲ့အမှုနဲ့ ထောင်ထဲရောက်သွားသောအခါ… အိမ်ပိုင်ရှင်အယ်လီစီရာတစ်ယောက် အမှုတွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါတော့တယ်။ အချိန်အတော်ကြာမသိခဲ့တဲ့ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ကလေးအဖေက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ??? သားဖြစ်သူ ဒန်နီရယ်ကကော သူ့အမှုကနေလွတ်ကင်းမှာလား အိမ်ဖော်မလေးဂလက်ဒီရဲ့အမှုကကော ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ??? ဆိုတာတွေကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် တွေ့မြင်ခံစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သူ့သားအပေါ်ထားတဲ့အတ္တ၊ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ မပြောရဲမဆိုရဲပဲ မုဒိန်းကျင့်တာခံရပြီး ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားတဲ့အခါ ချို့တဲ့နေသူရဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာမှုအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား စတာတွေကို အမှုနှစ်ခုကြား တွဲဆက်ပြီး ရိုက်ကူးတင်ပြထားပုံမှာ အရမ်းကို ကြည့်ကောင်းလွန်းလို့ ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုကြပါနော်။